आइतबार देखि शनिवारसम्म तपाइको भाग्यको रेखा कहाँ के गर्दैछ ? तपाइको जीवनको जिवनमा कस्ता काम हुन्छन् - Muldhar Post
आइतबार देखि शनिवारसम्म तपाइको भाग्यको रेखा कहाँ के गर्दैछ ? तपाइको जीवनको जिवनमा कस्ता काम हुन्छन्
साप्ताहिक राशिफल २०७४, २६ कार्तिक आईतवार 565 पटक हेरिएको
मेष राशिः मेष राशिका लागि यो साता अर्थकरी रहने छ । सोचेका काम बन्ने छन् । कर्मक्षेत्र बलवान् छ । कार्यमा उन्नति हुनुका साथै पदोन्नतिको अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ । सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्नुका साथै व्यापार व्यवसामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम फलदायी देखिन्छ । आमदानीका स्रोत बढ्नुका साथै सुखद् यात्राको अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ ।
वृष राशिः वृष राशिका लागि साता उन्नतिकारक रहने छ । सोमबारसम्म स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता रहनुका साथै खर्चमा पनि वृद्धि हुने छ । सो पश्चात्को समय उत्तम देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुने छ । अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने देखिन्छ । सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथै आर्थिक लाभ पनि हुने छ । धार्मिका यात्राका योग पनि देखिन्छन् ।
मिथुन राशिः मिथुन राशिका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहने छ । आर्थिक लाभका साथै सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुने देखिन्छ । भूधनबाट विशेष लाभ देखिन्छ । व्यापार व्यवसाय मध्यम फलदायी रहने छ । मंगलबार र बुधबार कार्यमा बाधाका साथै स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता रहन सक्ने देखिन्छ । विहीबारबाट कार्यमा सुधार हुदै जाने छ । सामाजिक कार्यमा विशेष अभिरुचि रहने देखिन्छ ।
कर्कट राशिः कर्कट राशिका लागि साताको पूर्वाद्र्ध विशेष फलदायी हुने देखिन्छ । सोचेका काम बन्ने छन् । मित्र सुख प्राप्त हुनुका साथै अध्ययनमा पनि रुचि जाग्ने छ । भू–धनबाट विशेष लाभ हुने छ । आर्थिक उन्नतिका साथै सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्ने छ । व्यवसायबाट पनि उन्नति नै देखिन्छ । विहीबारबाट स्वस्थ्यमा बाधा देखिनुका साथै खर्चमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । अन्य क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने छ ।
सिंह राशिः सिंह राशिका लागि यो साता अर्थकरी देखिन्छ । सोचेका काम बन्ने छन् । व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ हुने छ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै यात्राको योग देखिन्छ । अध्ययनमा रुचि जाग्नुका साथै उल्लेख्य प्रगति हुने छ । आमदानीका स्रोत बढ्ने छन् । मित्र लाभ हुने छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने सजगता अपनाउनु नै उचित हुने देखिन्छ । अन्य क्षेत्र फलदायी रहने देखिन्छ ।
कन्या राशिः कन्या राशिका लागि साता फलदायी रहने छ । अध्ययनमा रुचि जाग्ने छ । काम बन्नुका साथै आर्थिक लाभको योग पनि देखिन्छ । मित्र जनबाट भने सजग रहनु नै उचित हुने छ । कार्य लाभ हुने छ । आमदानीका स्रोत बढ्ने छन् । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथै व्यापार व्यवसायबाट पनि विशेष लाभ हुने देखिन्छ । स्वास्थ्यमा भने प्रतिकूलता रहन सक्ने देखिन्छ ।
तुला राशिः तुला राशिका लागि साता मध्यम फलदयी रहने छ । श्रीवृद्धिका साथै कार्यम उन्नति हुने छ । अध्ययनमा रुचि जाग्नुका साथै कला साहित्यमा विशेष जागरुकता रहने छ । मंगबारदेखि बुधबारसम्म कार्यमा अवरोध आउनुका साथै स्वास्थ्यमा पनि बाधा व्यवधान हुने देखिन्छ । सो पश्चात्को समय उत्तम फलदायी रहने छ । यात्राका अवसर मिल्नुका साथै राजनीतिक कार्यमा विशेष रुचि रहने देखिन्छ ।
वृश्चिक राशिः वृश्चिक राशिका लागि साताको पूर्वाद्र्ध विशेष फलदायी देखिन्छ । सोचेका काम बन्ने छन् । शत्रु पराजित हुनुका साथै आर्थिक उन्नति हुने देखिन्छ । कर्म प्राप्तिको योग छ । कार्यमा उन्नति प्रगति हुने छ । विद्याको क्षेत्रबाट लाभ हुने छ । साताको उत्तराद्र्धबाट शारीरिक आलस्यता बढ्ने देखिन्छ । कार्यमा अवरोध आउनुका साथै खर्च बढ्न सक्ने छ । मित्र सहयोग भने प्राप्त हुने देखिन्छ ।
धनु राशिः धनु राशिका लागि यो साता उन्नतिकारक रहने छ । मित्र लाभका साथै आर्थिक उन्नयन हुने छ । सुखद् यात्राको योग पनि देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ हुने छ । आफन्त जनको साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने छ । विद्याको क्षेत्र सबल छ । धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथै सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्ने देखिन्छ । आय आर्जनका स्रोत बढनुका साथै कीर्ति लाभ हुने देखिन्छ ।
मकर राशि : मकर राशिका लागि साता फलदायी रहने छ । मंगलबारसम्म कार्यमा अवरोधका साथै स्वास्थ्यमा बाधा रहन सक्ने छ । धनको क्षेत्र बलवान छ । कार्यमा उन्नति हुनुका साथै मित्र लाभको योग छ । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने छ । व्यापार व्यवसायबाट पनि सफलता हात पर्ने देखिन्छ । शत्रु निर्वल हुने छन् । सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्ने देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिले तपाइको यो साता सफल रहने छ ।
कुम्भ राशिः कुम्भ राशिका लागि साताको उत्तराद्र्ध विशेष फलदायी हुने देखिन्छ । श्रीवृद्धिका साथै व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ हुने छ । बुध र विहीबार कार्यमा अवरोध हुनुका साथै मिथ्यापवाद लाग्न सक्ने छ । विहीबारबाट स्वास्थ्य एवं कार्यमा सुधार हुँदै जाने छ । आमदानीका स्रोत पनि क्रमशः बढ्दै जाने छन् । अध्ययनमा सफलता मिल्ने छ । अन्य क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ ।
मीन राशि : मीन राशिका लागि साता फलदायी रहने छ । मित्रजनबाट विशेष लाभ हुने छ । अध्ययनमा रुचि जाग्नुका साथै उन्नति प्रगति हुने छ । व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुने छ । श्रीवृद्धिका साथै यात्राको योग पनि देखिन्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल रहने छ । कार्यक्षेत्र बाट विशेष लाभ हुने छ । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ । विहीबारबाट खर्च बढ्नुका साथै स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता रहने देखिन्छ ।
९८४१०१२२०३, ९८०८२११२०५ ।